Posted by Unknown Labels: पाहुनाको कलम
मलाई खोला पारी छाडि गै तिमीले के पायौ त,
एक्लै कुम्ल्याउन गएकि थ्यौ'नी, दर कति खायौ त ?
मैले त मुख छोप्ने टालो पनि पाइन नि यहाँ,
तिमी सिंगारिन कुन कम्पनिको सारी लायौ त ?
म त हारें, तिरस्कार तिम्रो, म जसरी बांचे'नी,
तिम्रो भु पु मायालु भेट्न तिमी कति धायौ त ?
मैले दे'का फूलहरु त पत्थर भए तिमीलाई,
तिम्रो 'मायालु' संग तिजको मन्दिर घुम्न आयौ त ?
चोखो माया मेरो बदनामी भयो तिमीलाई है,
तिम्रो गुणगान त कतै सुन्दिन, खै कता छायौ त ?